Dagaal Dhimasho badan sababay oo ka dhacay Degmada Balcad. – idalenews.com
Dagaal Dhimasho badan sababay oo ka dhacay Degmada Balcad.
Ugu yaraan 9 Askari oo ka tirsan Ciidamada Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya, ayaa Maanta ku geeriyootay Dagaal Culsus oo ka dhacay Degmada Balcad, ee Gobolka Sh/Dhexe.
Dagaalka ayaa ka billowday Duleedka Degmada Balcad, kadib markii Ciidamo military ah oo ka amar qaata Gudoomiyaha Degmadaasi Cusmaan Xaadoole ay Weerar ku qaadeen Ciidamo Boolis ah oo laga diray Muqdisho.
Afhayeenka Maamulka Gobolka Shabeellaha Dhexe, ayaa sheegay in Dagaalka ay sidoo kale ku dhaawacmeen 6 Askari oo uu ku jiro Taliyaha Ciidamada Booliska Gobolkaasi, waxaana dhaawacyada loo soo qaaday Muqdisho.
Dagaalka, ayaa lagu eedeeyay in uu ka danbeeyo Gudoomiyaha Degmada Balcad, Cusmaan Xaadoole oo Khilaaf weyn uu kala dhaxeeyo Gudoomiyaha Gobolka Sh/Dhexe, kadib markii Xilka laga qaaday, isna uu ka biyo diiday.
Gaadiid Dagaal oo ay wateen Booliska la weeraray ayaa lagu gubay Iska-hormaadka, halka qaar kalena la sheegay in ay Militariga la wareegeen loona waday dhanka Degmada Balcad.
Gudoomiyaha Degmada Balcad Cusmaan Xaadoole, ayaa sheegay in Degmada aysan imaan karin Ciidamo isaga aan ka amar qaadan iyo sidoo kale Gudoomiyaha Gobolka Sh/Dhexe.
Idale News Online-Balcad.